ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 18.11.08
မွေးနေ့အလှူကို ကုသိုလ်လာယူပါတယ်။ အချိန်လုနေရလို့ နောက်ရက်မှ စာအုပ်တွေလာယူရင်း တရားနာပါမယ်။
ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာဖြင့် ဆက်လက် သာသနာပြုနိုင်ပါစေခင်ဗျာ။
ကောင်းပါတယ်ဗျာ သာဓု.သာဓု.သာဓု ပါ
အခုလို မွေးနေ့မှာ တရားဓမ္မလေးတွေ ဖြန့်ဝေပေးတဲ့အတွက် စိတ်၏ကျန်းမာခြင်းကိုယ့်၏ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေဗျာ
အသက်၂၄ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှသည် ကျန်းမာ၊ချမ်းသာ
ပျော်ရွှင်စွာဖြင့် တရားဓမ္မအလှူများ ကိုဆက်လက်
ဖြန့်ဝေနိုင်တဲ့သူ ၊ နိုင်ငံအကျိုးကိုသည်ပိုးထမ်းဆောင်နိုင်
မွေးနေ့လက်ဆောင်လေးကို စီဘုံးမှာ ထည့်ခဲ့မယ်နော်။
သာသနာကိုဒီ့ထက်ပို၍ ထွန်းကားအောင်လုပ်နိုင်ပါစေ။ ရည်မှန်းချက်တွေပေါက်မြောက်အောင်မြင်ပြီး လိုသမျှပြည့်စုံပါစေ ကိုအောင်ဦးရေ...
အစ်ကိုကြီးတောင် မွေးနေ့ရောက်ပြီကိုး။ ဘုရားတရားနဲ့ အေးချမ်းလှတဲ့ အစ်ကိုကြီးကို အထူးအထွေ ဆုတောင်းပေးစရာမလိုပေမယ့် လို့ "ပျော်ရွှင်သော မွှေးနေ့ဖြစ်ပါစေ။ " ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ မိဘကျေးဇူးကို အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းနဲ့ ဆပ်နိုင်တဲ့ အတွက် လေးစားပါတယ်။
စကားမစပ်၊ မုန့်ဟင်းခါးလာစားမယ်နော်။ ဟိ ဟိ။
မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ၊ မွေးနေ့အလှူကို ၀မ်းပမ်းတသာ ယူဆောင်သွားပါတယ်။ ဗုဒ္ဓအကျိုး၊ သာသနာ့အကျိုးကို ဆထက်ထမ်းပိုး သယ်ပိုးရွက်ဆောင်နိုင်တဲ့ သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်ပါစေဗျာ
ကိုအောင်ဦးရဲ့ မိဘနှစ်ပါးလည်းကျန်းမာပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်...(မယ်)
ညီလေးရေ မွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာထိ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓအကျိုးကို ဒီထက်ပိုပြီး သယ်ပိုးနိုင်ပါစေ ။
ဟောတော့် ခုမှအသက် ၂၄ လေးဟင်... တော်လိုက်တာနော် ဘာသာရေးလိုက်စားတယ် မထင်ရဘူးစ.. Happy Birthday!!!! နော်း) ယနေ့ အသက် ၂၄ နှစ်မှစ ဘာသာရေး သာသနာရေးကို ဒီထက်မက မျှဝေပေးနိုင်ပါစေဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်နော် ။
မွေးနေ့မှာ စိတ်ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်ချမ်းသာခြင်းများစွာနဲ့ပြည့်စုံငြိမ်းချမ်းပါစေ
မွေးနေ့မှာပေးလှူတဲ့ ကုသိုလ်ဒါနတရားတွေ ကြောင့် ဒီမွေးနေ့မှသည် ကောင်းသော သတင်း ကောင်းသော စကားများကို သာ ကြားနိုင်ပါစေ...
မွေးနေ့အလှူ တရားတော်ကို နာသွားပါတယ်...
သာဓု သာဓု သာဓုပါ မောင်လေးရေ...
တရားဓမ္မတွေ မျှဝေပေးတဲ့ မောင်လေးတစ်ယောက် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပြီး တိုင်းပြည်အကျိုးကို ဆထက်တပိုး ထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ သားကောင်းရတနာလေး ဖြစ်ပါစေကွယ်... :)
တင်နေတဲ့ ပို့စ်တွေကြည့်ပြီး ဒီလောက်ငယ်လိမ့်မယ် မထင်ခဲ့ဘူး...
ဦးဦးရေ.. သမီး တရားလာနာသွားပါတယ်။
ဓမ္မစာအုပ်တွေလည်း ဖတ်ဖို့Downloadသွားပါတယ်။
***မွေးနေ့ မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ..***
မောင်ငယ်လေး မွေးနေ့ မှ နောင် သံသယာမှလွတ်သည့် မဂ်ဖိုလ်ရချိန်အထိ ဆင်းရဲဒုက္ခဟူသမျှနဲ့ ကင်းဝေးရပြီး ကောင်းမြတ်တဲ့ပါရမီ ရင့် စွာ သာသနာ့ ၀န် ကိုထမ်းဆောင်နိုင်ပါစေ ။။ လောကီ သံသယာ ကျင်လည်နေခိုက် အမိုက်အမှားရှောင်ရှားနိုင်ပြီးသူတော်ကောင်းတွေ နဲ့သာ အမြဲပေါင်းဖေါ်ယှဉ်တွဲမှီဝဲ နိုင်ပါစေ ။။ သူတော်မဟုတ် သူယုတ်များနှင့်ကင်းဝေးပါစေ မောင်ငယ်လေး လိုရာဆုဟူသမျှမုချပြည့်ဝရပါစေ ။
ညီလေးရေ ၁၈.၁၁.၂၀၀၈ရက်နေ့ မှာကျရောက်သော
၂၄နှစ်မြောက်မွေးနေ့ မင်္ဂလာမှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများ
မွေးနေ့မှာ စ နောင်များတိုင်
တရားဓမ္မဖြင့် တည်ငြိမ်စွာ နေ့ရက်များကို ဖြတ်သန်း၍
မိဘ ဆွေမျိုး မောင်နှမများ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများနှင့်
စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိူင်ပါစေလို့ ကိုအောင်ဦးကို ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်
ကိုအောင်ဦးရေ မွေးနေ့အလှူအတွက်သာဓုခေါ်ပါတယ်။ ၂၄ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှသည် စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာစွာနဲ့ မိဘကျေးဇူးဆပ်ပြီး နိုင်ငံအကျိုး သာသနာအကျိုးကို ဆထက်တပိုးသယ်ပိုးနိုင်ပါစေနော်
Happy Birthday ပါ မောင်လေးအောင်ဦးရေ... မွေးနေ့အလှူတွေကိုလည်း အကုန်ယူသွားပါ့မယ်။ လေးလေးနက်နက် သာဓုလည်း ခေါ်ပါတယ် မောင်လေး။ အသက်၂၄နှစ်ကနေ အသက်ရှည်ကျန်းမာစွာနဲ့ သာသာနာအကျိုးကို အဆုံးစွန်ထိ သယ်ပိုးနိုင်တဲ့ မွန်မြတ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါစေလို့ အစ်မလေးလေးနက်နက် ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
မောင်လေးရေ... အရောက်နောက်ကျလို့ ဆောရီးပါနော်။
၂၄နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မှသည် နောက်ထပ်နျစ်ပေါင်းများစွာဆက်လက်ပြီး သာသနာပြုနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
အစ်ကိုရေ မွေးနေ့ပွဲကို မသိလိုက်လို့ အရောက်နောက်ကျခဲ့ပါတယ်..။ ဒီလင်္ကာလေး ကို မွေးနေ့ လက်ဆောင်အဖြစ် ညီထားခဲ့ပါတယ်..။
ဖြစ် ခိုက် ရုပ် နာမ် ၊ ဖြစ် တိုင်း ဟန်
ဧ ကန် သိ မှတ် ပြု ။
အ လုပ် နေ ရာ ၊ ဣ ရိ ယာ
ချိန် ခါ မ ရွေး ရှု ။
မွေးနေ.ကသိပ်မကွာဘူးဗျို. ကျွန်တော်က ၂၀ရက်နေ.ဗျ။